ISISTIM EPHEZULU YE-SOLAR KUNYE NEPLANETHI YETATTOO YEENGCINGA [ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA SAMA-2021] - UHLOBO
Iingcamango ezingama-60 eziPhambili zeZitepsi zokuKhanyisa iZitayile-Amanyathelo akhanyisiweyo
Iimbono ezingama-60 eziGqwesileyo zeGumbi lokuhlambela eliPhambili- Uyilo lwangaphakathi lwasekhaya
Imidlalo yeRockstar ixelwe njengesihloko esithi 'GTA'
Isistim ephezulu ye-Solar kunye nePlanethi yeTattoo yeengcinga [Isikhokelo sokuphefumlela sama-2021]
Ukuvula imbonakalo yefashoni ye-interstellar, amadoda anamhlanje anesitayile ahlala ekhetha iiatatoos zenkqubo yelanga. Ubukumkani obunobungqingili bobugcisa bomzimba bunokuguqula nawuphina umntu ukuba abe yinkosi yesonove seduvely sangaphandle.
Ngomtsalane weplanethi, akukho nto iphakamisa umboniso omangalisayo weinki yenkqubo yelanga. Ezi tatto zinoluhlu olwahlukileyo lokuhenda olugqitha uninzi lwamadoda. Banomtsalane kakhulu kwi-astronomy buffs kunye ne-astrology aficionados ngokufanayo.
Ukongeza, ezi zoyilo zegalactic zininzi kakhulu. Isangqa esine-Concentric lukhetho olongezelelekileyo lweetattool phakathi kwabathandi beenkqubo zelanga, ngakumbi kuba zibandakanya ukujikeleza komzimba ngamnye wasezulwini. Ilanga ngokwesiqhelo yindawo ephambili kwezi zinto zidaliweyo, kwaye indawo ekugxilwa kuyo elanga inokubonakaliswa ngeendlela ezininzi ezingenamandla. Ungasebenzisa kwakhona ubugcisa bomzimba wakho we-solar ukuthatha ukuma kwiPluto yeplanethi yeplanethi kanye kunye!
Ulwazi ngehoroscope yobuqu lunokusetyenziswa ngobuqili ngokunjalo. Ngenxa yokuba iimpawu zeenkwenkwezi zihambelana ngqo neeplanethi, ezi zixhobo ezibonakalayo ezibonakalayo ziyakwazi ukubonisa ukulungiswa kwenkqubo yelanga ngexesha lokuzalwa kwakho. Ezi tshathi ziya kutyhila indalo yakho yangaphakathi kwiliso eliqeqeshiweyo.
Kubo bonke abanye abantu, itattoo yohlobo oluthile iya kuba yinto nje entle kubuntu bakho. Jonga ukubakho kokwenza ulusu lwe-cosmic apha:
1. Umbala weattoos yenkqubo yelanga
Ukongeza umbala kumzobo owenziwe kakuhle weziqwengana zeplanethi kuzisa itattoo kwinqanaba elilandelayo, ukuphucula umgangatho womsebenzi wokuqala ngokubandakanya inkalakahla enkulu yeeplanethi ngokwazo. Iiplanethi zendalo zibonelela ngemibala eyahlukeneyo eyahlukileyo emitsha ethi ukuba isetyenziswe ngokufanelekileyo kulusu ibonisa umbala kunye nokusetyenziswa kobuchwephesha. Inkqubo yelanga Iitatto eziqukethe umbala izisa ubunzima emsebenzini, ukunceda ukunceda isiqwenga sifezekise inqanaba elitsha lobunyani. I tattoo ayifuneki ukuba igcwaliswe ngokupheleleyo ngombala ukufikelela kweli nqanaba. Kwiimeko ezininzi, ukusebenza ngokuqinileyo kunye nombala obekwe ngobuchule kunokuguqula isiqwenga kwangoko! Umfanekiso wokugqibela uyayixhasa ngamandla le ngcamango ngokongeza ingcinga efihlakeleyo yeblue ukubonisa obu buchule busisiseko. Nangona kunjalo, ukuba ubunyani ayisiyonjongo, iskimu sombala kunye noyilo oluhlonitshwayo ziitattoos ze-intergalactic ziqinisekisiwe ukuba zinika uluhlu olubanzi lweembono.
ubuhle kunye nerhamncwa lesilo tattoo
2. Iinkwenkwezi bukunqongophala kunye ne-inki engwevu
Iziqwenga ezimnyama nezingwevu ziyimpawu ezibonakalayo, zakudala, kwaye ziya kuhlala zibambe indawo kwinkcubeko kunye noyilo. Nangona ukongeza umbala kwisiqwenga seplanethi kuluncedo ekwenzeni imbonakalo yokwenyani, umnyama omnyama nomsebenzi ongwevuizisaindlela eyahlukeneyo yokuntsokotha. Ngokufana nendawo, iitatoo ezimnyama eziqinileyo zenza ubunzulu obukhulu kunye nokwahluka okumnyama okunceda ukwahlula indawo ekugxilwe kuyo ngasemva. Umvambo wesithathu obonisiweyo ubonakalisa ukwahlulahlula umphambili kunye nemvelaphi, isenza umxholo uqiniseke ngakumbi. Nangona uyilo lungabandakanyi nawuphi na umbala, inyani yokwenyani ivela kubuchule begcisa lokufaka umthunzi ngokufanelekileyo kwaye isebenzise ukusetyenziswa kwesithuba esibi. Ukudala inkohliso yobunzulu kunye nendawo kwi-inki yeplanethi yeyona nto ibaluleke kakhulu kwitatto emnyama emnyama nengwevu. Ayizizo zonke iziqwenga zenkqubo yelanga ekufuneka zintsokothile. Sebenzisa ngaphezulu indawo engalunganga kunye ne-inki emnyama eqinileyo yenza i-tattoo elula, kodwa enzima yokubetha!
3.Ubuchule sIinkqubo zetattoo
I-alice kuyilo lweetatland tattoos
Iimpawu ze-Abstract zihlala zithatha umxholo okanye umbono kwinto yoqobo kwaye ziyidibanise ngobuchule kwiindlela ezahlukeneyo okanye uyilo. Oku kubandakanya iintlobo ezininzi zokwenza umvambo kwaye kuvumela eyona nto ibalulekileyo! Itattoo yinyani yokwenyani yoyilo olubunjiweyo kwinto eyahlukileyo kwaye ngamanye amaxesha ayaziwa. I tattoo inokubandakanya eyendabuko, emnyama nengwevu, umbala, umsebenzi olula womgca, umsebenzi wamachaphaza, kunye nokudityaniswa okuninzi kwezitayile. Umfanekiso wokugqibela ubonisa ngokufanelekileyo ukusetyenziswa kwesitayela sendabuko ukubonisa ezinye iiplanethi ezidlalayo! Umdibaniso weendlela ezininzi unceda ukuseka umvambo ontsonkothileyo osusa ubunyani kwaye ujolise ikakhulu kubuchule kunye nakwimbonakalo yobuqu. Isiqwenga esingaqondakaliyo sinokuhlala sinentsingiselo eyahlukileyo kunaleyo ityhilwa ngokucacileyo ngumsebenzi wobugcisa. Indawo inkulu kwaye inzima, eneentlobo ezingapheliyo zokuphefumlelwa kwendalo onokukhetha kuzo ezinje ngesakhiwo se-orbital okanye iinqwelomoya ezikude.
Zine.Iitattoos zenkqubo yelanga yejiyometri
Iitattoo zomkhono omnyama nengwevu
Ngokufana Iitattoo ezingabonakaliyo , Uyilo lwejiyometri lusebenzisa iimilo ezahlukeneyo kunye nemigca ukuseka isiqwenga siphela. Olu hlobo lujolise ngakumbi kwimbono yomgama yenkqubo yelanga endaweni yeeplanethi ngokwazo. Ngelixa ezinye ii-tatoo zidibanisa iiplanethi kwisitayile sokwenyani, ukugxila kwiitattoos zesitayile sejiyometri yimigca kunye neemilo ezibekwe ngobuchule kwisiqwenga ukubonisa intsingiselo eyahlukileyo. Njengomsebenzi ongafakwanga, i-inki yejiyometri idala ubugcisa obutsha. Inkqubo ye- Umvambo wekhampasi kubonisiwe kudityaniswe ngokucocekileyo kunye nemigca ye-orbital ephazamisa imida ye tattoo esemgangathweni. Iimpawu ezahlukeneyo zeenkwenkwezi zidlala into ekwakhiweni kwetattoo kwaye zinokumisela ukuba zibekwe phi iimilo kunye nemigca, kuzisa ukungaqhelekanga kweetattoos zejometri kwinqanaba elitsha! Ezi zoyilo azilandeli isikhokelo esithile, endaweni yoko zenzelwa umntu ozinxibileyo. Amathuba okudala ayipheli!
Zine.Inkqubo yesolaUmlenze / iiTattoos ezibuyayo
I tattoo yebhaluni yomoya oshushu yendabuko
Ukubekwa kweTattoo kubaluleke ngokulinganayo kwisicelo sobuchwephesha okanye ukwenziwa kwetattoo. Ukuba itattoo ayifakwanga kakuhle, isiqwenga siya kutshabalala kwasekuqaleni! Kubalulekile ukubeka ulwandlalo ngokufanelekileyo ukuvumela itattoo ukuba ingangxami okanye iphazamiseke ngokuhamba. Ngalo mgaqo engqondweni, umva kunye nemilenze zibonelela umculi we tattoo iseyile enkulu enexabiso elikhulu lendawo yokusebenza kuyo. Iitattoos zenkqubo yelanga zinokubekwa phantse naphi na kodwa zihamba kakuhle ngakumbi kwiindawo ezinkulu zomzimba. Isitayile asibalulekanga kangako ngokubekwa kunye nobungakanani be tattoo. Inkulu, icwangciswe kakuhle, uyilo lwe-intergalactic lukhangeleka lusasazeka ngaphezulu kwesixa esikhulu solusu. Ukusetyenziswa okufanelekileyo kwendawo enikiweyo kunye nokucaca komqondo kudala ithuba lokongeza iinkcukacha ezingapheliyo.
Ithetha ntoni itattoo yenkqubo yelanga?
Ukutsalela umnxeba bonke abathandi besayensi, oonondaba, kunye nabalandeli abazinikeleyo beempawu zeenkwenkwezi, inkqubo yelanga ene tattoo inokuba ilungile kuwe. Ngeendlela ezininzi kunye nemixholo yoyilo ekhoyo onokukhetha kuyo, uqinisekisiwe ukuba uza kufumana itattoo emele ukuthatha kwakho isitayile sobugcisa be cosmic!
Uyalonwabela olu luhlu lwe-inki engendawo ye-interstellar? Cofa kwiikhonkco ezingezantsi ukuze wenze umxholo ongaphezulu kokungaphaya:
IiTattoos eziyi-100 zeAstronaut
Iinyanga zeNyanga ezingama-75 zeTattoos
Uyilo lweTatoo eyi-100 ye-UFO
I-8 yeeGrill eziPhathekayo eziPhathekayo zeeKampu
Iingcamango ezingama-71 zeTattoo zoSapho [2021 Isikhokelo sokuphefumlelwa]
Iingcamango eziphezulu ze-60 + zeTattoo zeNdlovu ezincinci- [2021 Isikhokelo sokuphefumlelwa]
Ezona zibane zibalaseleyo zezibane zeKampu
I-40 yomlenze womthi weTattoo Uyilo lwaMadoda-Iinki eziMiselweyo
Esemthethweni 'Spiderman: Akukho Ndlela Yasekhaya' Iitrailer emva kokuvuza
iiTattoo ezincinane zesihlahla samadoda
igumbi lokutyela elinerustic lokuhombisa izimvo
umgangatho kwishelufa yencwadi
i-forearm rose tattoos kubafana
Uluhlu lwezinto ezincedisayo zamadoda
Imoto eyothusayo emhlabeni